Ma rumeysan doontid, marka aad Aragto inta ciyaartoy ee Caan ah haddana ka mid ah Qoxootiyada Kubbadda Cagta Ciyaarta, Soomaali ayaa ka mid ah!!! | www.banooni.net
Hay’adda FARE loosoo gaabiyo magaceeda ee (Football Against Racism in Europe) ayaa xustay maalinta Qoxootiga Adduunka iyadoo soo bandhigtay ciyaartoyda Qoxootiga ah ee ciyaara, ama xataa ay ehelladoodu soo qaxeen, kana ciyaara 8-da horyaal ee Europe ugu sarreeya. Waxay aheyd Sababtu in ay wax ka xusaan maalinta June 20-keeda ah oo ku addan Maalinta Qoxootiga Adduunka.
Waxaa ciyaartoydaas ka mid ah Liverpool iyo Croatia laacibkooda Dejan Lovren, oo horraantii Sanadkan soo baahiyay Film uu uga hadlayo dhibaatadii ku wajahday Bosnia dagaal ay la galeen Yaraantiisii.
“Marka aan aragno waxa manta dhacaya [ee qoxootiga heysta waxaan xasuustaa Ilmanimadeydii iyo Ehelkeygii iyo sida aan loo jecleyn iyaga waagaas,” ayuu ku yiri sheekada Lovren – ee Nolosheydu waa Qoxooti.
“Waxaan ka war hayaa in dadku doonayeen in ay is samata bixiyaan iyagoo aan Guryo heysan. Waxaa jiray dagaallo Nafta dadka la tegayay. Waan soo cararnay waa in fursad la siiyo kuwa hadda soo cararayana.”
“Kuwaani waa qaar ka mid ah xiddigihii ugu fiicnaa ee Europe waxaanna Aaaminsannahay in ay yihiin kuwo horumar sameeyay, waxay intooda badan ku guuleysteen koobabka Yurub sida Champions League,” waxaa yiri Agaasime ku xigeenka FARE, Piara Powar. Ciyaartoydan waxaa ka mid ah kuwo ka ciyaara Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A, Norway horyaalkeeda Eliteserien, Russian Premier League, LaLiga iyo Turkish Super League.
Steve Mandanda (Crystal Palace, France)
Goolhayahaan ayaa ku qasbanaaday in Kinshasa oo horay u aheyd Zaire, haddana ah Democratic Republic of Congo, intii uu xukunka hayay Mobutu Sese Seko wuxuuna tegay Liege, Belgium.
Wuxuu degganaa Kaduna, Nigeria, Waalidiintiis waxaa lagu weeraray gurigooda waana la dilay sanadkii 2002. Moses ayaa markaas waddooyinka ku ciyaari jiray kubbadda cagta, wuxuuna qax ku tegay England, halkaas waxaa kusoo dhoweeyay waalidiin joogay Koofurta London.
Dejan Lovren (Liverpool, Croatia)
Lovren iyo qoyskiisu waxay kasoo carareen deegaanka Kraljeva Sutjeska, oo ka tirsaneyd Yugoslavia, markii uu dagaalka Sokeeye ka dillaacay dalkaas ugu yaraanna waxaa ku dhintay 100,000 “Boqol Kun” oo qofood.
Neven Subotic (Borussia Dortmund, Serbia)
Isagoo carruur ah ayaa isaga iyo qoyskiisu kasoo carareen dalkoodii, wuxuuna soo galay Germany ka hor dagaalkii Sokeeye ee Yugoslavia. Wuxuu jiray 11-sano, wuxuu u wareegay United States isagoo ciddiisa la socda, wuxuuna ka ciyaaray IMG Soccer Academy ka hor inta uusan ku biirin Mainz sanadkii 2006.
Liban Abdi (FK Haugesund, Somalia)
Abdi waa mid ka mid ah ciyaartoydii ugu horreysay ee Somali ah ee noqda ciyaartoy heer Caalami ah kana xamaasha Europe, wuxuu u qaxay Norway markii uu 2 sano jiray isagoo ka cararay colaad sokeeye oo Dalkiisa ka dillaacday. Keddib wuxuu aaday England wuxuuna ku biiray Sheffield United wuxuu sidoo kale u ciyaaray Ferencvaros iyo Olhanense.
Modric ayaa ka qaxay gurigoodii oo ku yaallay Zadar oo ka mid aheyd dhul weynihii la isku dhihi jiray Yugoslavia waxay ku noolaayeen Gabbaad Cooshado ah oo ku yaalla Croatia intii uu socday dagaalkii Madaxbannaanida ay ku raadinayeen dalkiisu Sanadkii 1990-kii.
Miralem Pjanic (Juventus, Bosnia and Herzegovina)
Laacibkan ayaa ku dhaqanka iyo ciyaarista Kubbadda cagta uga mahad celinaya Aabihiis, oo kasoo ciyaaray Yugoslavia, wuxuuna kasoo ciyaaray Luxembourg keddib markii qoyskiisa ay halkaas u qaxeen.
Xhaka ayaa ku dhashay magaalada Basel, Switzerland waxaana dhalay waalidiin reer Albania ah, wuxuuna qoyskiisu kasoo qaxay Podujeve (Kosovo) ka hor wax yar uun inta uusan dhalan walaalkiis Taulant.
Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund, Syria)
Sanadkii 1996, Dahoud qoyskiisa ayaa ka qaxay dalka Syria isagoo la socda, wuxuuse markaas jiray 10 bilood, wuxuuna ku biiray qoyskiisa oo qoxooti ah. Wuxuu ku biiray Borussia Monchengladbach isagoo yar wuxuuna noqday laacibkii ugu horreeyay ee Syrian ah ee ka ciyaara Bundesliga.
Saido Berahino (Stoke City, Burundi)
Berahino ayaa kusoo koray dalka Burundi wuxuuna Aabihiis ku waayay dagaalkii sokeeye ee dalkaas, waxay ka carareen dagaalkaas keddibna waxay tageen United Kingdom 2-sano keddib dhibaatadii dalkaas ka dhacday.
Christian Benteke (Crystal Palace, RD Congo)
Benteke ayaa ku dhashay Democratic Republic of Congo markii loo yaqiin Zaire balse kaliya 2 ayuu jiray, markii loo diray Liege oo ay waalidiintiis u kaxeeyeen intii dagaalladu socdeen.
Vedad Ibisevic (Hertha Berlin, Bosnia and Herzegovina)
Ibisevic ayaa ku dhashay kuna barbaaray Vlasenica oo ah Bariga Bosnia, halkaas oo uu joogay tan iyo 2000. Keddib qoyskiisa ayaa u qaxay dalka Switzerland keddibna USA, halkaas oo uu ka billaabay ciyaaristiisa isagoo u dheelayay kooxda Jaamacadda University of St Louis.
Rio Mavuba (Lille, France)
Mavuba ayaa ku dhashay Markab kuwa wax badbaadiya ay wateen, intii uu socday dagaalkii Angolan ee Sokeeye ha yeeshee dhalasho ahaan kama uusan mid noqon Karin dalkiisa, wuxuuna ku dhashay badda, 2004, wuxuu helay warqadda dhalashada Muwaadinnimo ee Faransiiska.
Vedran Corluka (Lokomotiv Moscow, Croatia)
Wuxuu ku dhashay Yugoslavia, Corluka wuxuu ka guuray Zagreb sanadkii 1992 isagoo ka cararay dagaalkii Bosnia.
Xherdan Shaqiri (Stoke City, Kosovo)
Wuxuu ku dhashay Gjilan, Kosovo isagoo ay iska dhaleen Albanian-Kosovar waalidiin ah, wuxuu u qaxay Switzerland intii uu socday dagaalka Sokeeye ee dalkiisa 1992.
Lomana LuaLua (Sanliurfaspor, RD Congo)
Wuxuu ku dhashay Kinshasa, oo horay uga tirsaneyd Zaire, wuxuuna qoxooti ku galay qoyskiisu 1980 Bariga London.
No Responses to “Ma rumeysan doontid, marka aad Aragto inta ciyaartoy ee Caan ah haddana ka mid ah Qoxootiyada Kubbadda Cagta Ciyaarta, Soomaali ayaa ka mid ah!!!”